Iphupha lokuzingelwa Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
I-Moss kunye neenaliti zeenaliti zisithoba isandi seenyawo ezikhawulezayo, amasebe abetha ubuso bakho, kwindawo ethile emva kwakho kukuqhekeka kumzantsi-ukuzingelwa yinto eyiphupha. Inokwenzeka ehlathini, umzuzwana odlulileyo uphume wonwabile nabanye, ngequbuliso ulixhoba ngokwakho. Ephupheni unokuzibona njengomzingeli olinde kwindawo ephezulu emaphethelweni ehlathi kwizilwanyana zasendle ezinje ngexhama, ingulube yasendle, iimpungutye okanye iihares.
Okanye ukuzingela kusihambisa esixekweni, kugwegwesha phakathi kweebhuleki ezikhwankqisayo kwanabantu abaninzi abathi beze kuthi basijonge bedidekile. Ngamanye amaxesha ukuleqa okunje kunqumla imida yelizwe, njengakwimovie yesenzo okanye into ebangela umdla, sinokuba sihamba ngemoto yokubaleka ngelixa abo basukelayo abasaziwayo beshushu kwizithende zethu.
Amaphupha anje- apho sigxothwa okanye sizingelwa- ngokufanayo phantse kuyo yonke into el mundo Ubuphupha ngabo ngaphambili kwaye bathetha kakhulu malunga ne-psyche kunaleyo yentshutshiso yokwenyani ...
1 Umqondiso wephupha "lokuzingelwa" - ukutolikwa ngokubanzi
2 Umfuziselo wephupha «lokuzingelwa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umfuziselo wephupha "lokuzingelwa" - ukutolikwa kokomoya
Umqondiso wephupha "lokuzingelwa" - ukutolikwa ngokubanzi
Ngubani ephupheni uba lixhoba lentshutshiso, kunokwenzeka ukuba unalo Uxinzelelo okanye ukulwa noxinzelelo lwexesha kubomi bemihla ngemihla. Baleka ukusuka kumhla ukuza kuthi ga ngoku ngaphandle kokuthomalalisa phakathi. Uxinzelelo lomsebenzi kunye noxinzelelo lokwenza ngokukodwa zihlala zibonakaliswa kula maphupha.
Imvakalelo yokuleqwa kunye nokubaleka nayo inokunxulumana neqabane. Iphupha liziva liphantsi uxinzelelo ehleli ekhoneni njengezilwanyana xa kuzingelwa. Amaxesha amaninzi oku kungenxa yokoyika ukunamathela okanye kakhulu isini umva.
Ukuba umntu ophuphayo angakhumbula ukuba ngubani owamleqa ephupheni, umleqisi (kusenokubakho abaliqela) uhlala echaza ngokucacileyo unobangela woxinzelelo. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, uphawu lwephupha lukwathetha uloyiko. Ukuphupha uziva utshutshiswa okanye ubaleka iimvakalelo zakho.
Ukuba umphuphi unethemba lokuthatha inxaxheba ekuzingeleni njengomzingeli kwaye ngequbuliso azibone esengozini yokufa, iphupha limele a isilumkiso Kule mihla, ungangqonge nabantu abangathandekiyo ongafanele ubathembe kancinci.
Ukuba uleqwa lihlokondiba leelynchmen ephupheni, kuya kufuneka uqaphele ukuba kukho abantu abasondeleyo kuwe abafuna ukukubona emhlabeni. Ukuleqwa liqela elikhulu labantu nako kuhlala kubangela Ukuziva unetyala ifuzisela.
Ukuba yenye indlela ejikelezileyo, kwaye umntu oleleyo ulandela umntu okanye into ethile kwilizwe lamaphupha, umzingeli angathanda ukwenza ibhalansi. Mhlawumbi loo ngxelo isazela esibi kwaye umphuphi akafuni nto ngaphandle kokuxolelana nomntu othile. Lifikile ixesha lokucela uxolo.
Ukuba uku-safari kwiminyhadala yamaphupha kunye nokuzingela izilwanyana zasendle, iintlobo zezilwanyana zithatha isigqibo sokuhlalutya iphupha. Amarhamncwa ayingozi okanye iinkawu zalatha iingxaki ezibangelwa zii-anmalischen zazo Shoot ezinje ngomnqweno ogqithisileyo wesini okanye ubundlongondlongo.
Umfuziselo wephupha «lokuzingelwa» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba lengqondo, uphawu lwephupha "elitshutshiswayo" libhekisa kuloyiko lokuba kwiimeko ezigabadeleyo zinokujika zibe yi Paranoia inganda. Lowo uphuphayo unokukholelwa ukuba uyatshutshiswa ebomini bokuvuka okanye uyakrokra ukuba umngqongile.
Rhoqo kukho amaphupha amabi ngolu hlobo ngasemva. I-Emociones okanye ukungavisisani, okuphupha kucinezela endaweni yokulungiswa. Akafuni kujongana noloyiko lwakhe kwaye uzama ukulubaleka ngelixa elele.
Olunye utoliko olunokwenzeka yile Inqanaba lobudlelwane Akuqhelekanga kumaphupha apho iphupha liqhutyelwa khona libuyela ekoyikeni ukusondelana okanye ukungqubuzana ngesini somntu. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba umphuphi uzibona njengesilwanyana ukuba sidutyulwe ngabazingeli.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, isimboli yamaphupha ethi "haunted" ingabonisa ukudinwa okanye ukusebenza kakhulu kwengqondo kwaye ibe sisilumkiso sokuba iphupha liya kungena kwenye. Phumla kunyanzelekile.
Umfuziselo wephupha "lokuzingelwa" - ukutolikwa kokomoya
Ngokomoya, iphupha apho umntu oleleyo egxothwa abonisa ukuba yinxalenye yakhe kwedini Kuya kufuneka akwazi ukuqhubeka nendlela yakhe yokomoya.